Taliye sare oo lagu dilay dagaal ka socda Sh/|Dhexe | KEYDMEDIA ONLINE
Taliye sare oo lagu dilay dagaal ka socda Sh/|Dhexe
Col C/waaxid wuxuu ahaa askartii lagu soo tababaray dalka Turkiga ee dhawaan Muqdisho lagu soo celiyay.
JOWHAR, Soomaaliya - Dagaal culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka socda degaanno ku yaalla duleedka Jowhar ayaa geystay khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isagu jira.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa Maanta xaqiijiyay in dagaal ka dhacay tuulada Jalable, oo katirsan War-Ciise lagu dilay Gaashaanle Maxamed C/waaxid oo ahaa Sarkaal aad ugu firfircoon difaaca dalkiisa, kana dhex muuqday Ciidanka.
Gaashaanle C/waaxid wuxuu katirsanaa Guutada 6aad ee Gorgor, isagoo tababar kusoo qaatey dalal kala duwan, oo ugu dambeeyay Turkiga, waxuuna markii dalka kusoo laabtay loo qaadey jiida hore ee dagaalka, oo ugu dambeyn lagu dilay.
Ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab dagaal ku dhex-maraya degaanno ku teedsan inta u dhaxaysa Jowhar iyo Ceel-Cali, waxaana colaadda ku dhintay askar iyo saraakiil badan.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jen Odowaa Yuusuf Raage ayaa hogaaminaya howlgallada, isagoo maalin kahor sheegay inay dileen in ka badan 100 katirsanaa Kooxda Al-Shabaab.